Mas'uuliyiinta shirka Asmara iyo dowladda Mareykanka oo aad u sii kala fogaaday iyo madaafiicda lagu garaacayo goobo ay ka mid tahay Villa Soomaaliya oo sii xoogeystay. Ruunkinet 10/09/07
Naceyka mas'uuliyiinta shirka Asmara iyo dowladda Mareykanka ay sii kordhay 24 saac ee la soo dhaafay kadib markii Ms Jandai Fraizer oo u qaabilsan dowladda Mareyjkanka arrimaha geeska Afrika ay ku sheegtay in dowladda Eriteriya ay gabaad siisay qaar ka mid ah argagixisida ay dowladda Mareykanka la dagaalameyso.
Jandai ayaa si cad u magacowday in Sheekh Xasan Dahir Awees inuu ku sugan yahay dalka Eritereya halkaasi oo uu ka socdo shir weyne ay isugu yimaadeen qaar ka tirsan baarlamaanka Xorta ah, maxaakiimta Islaamiga ah, qurba joogta Soomaalida iyo ururuda Bulshada oo dhamaan ka soo horjeeda joogitaanka ciidamada Itoobiya ee dalka Soomaaliya.
Dhinaca kale, warar ayaa sheegaya in afhayeenka shirka Asmara uu aflagaaddo u geystay Ms Frazier mar uu la hadlayay saxaafadda in kastoo aan warkaasi la xaqiijin.
Dowladda Mareykanka ayaa la aaminsan yahay in si weyn u dooneyso in ay ka dhigto waxaan jirin waxa ka soo baxa shirka Asmara oo ah mucaaradka ugu weyn ee lagu diidan yahay ciidamada dowladda Itoobiya ay ku joogaan Soomaaliya.
Dhanka kale, waxaa sii kordhay madaafiicda iyo hoobiyeyaasha lagu garaacayo saldhigyada dowladda iyo meelaha ay ku sugan yihiin ciidamada dowladda iyo kuwa Itoobiya ee magaalada Muqdisho.
Xalay ayaa lagu tuuray madaafiic hoobiyoyaal ah goobo ay ka mid tahay madaxtooyada Villa Soomaaliya.